सेयर तालिम नेपाली पैसामा आइतबारबाट सुरु हुँदैछ, लगानीका बेजोड मन्त्रहरु सिक्ने अवसर
काठमाडौं : सेयर बजारमा कसरी सुरक्षित लगानी गर्ने ? बजार बढ्दा अधिकतम लाभ लिन सक्ने अनि घट्दा न्यून मात्र क्षति व्यहोर्ने उपाय के होला ? कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अनि ती कम्पनी छान्ने प्रमुख आधार के ? पक्कै पनि तपाईंको मनमा पनि यस्तै जिज्ञासाहरु होलान ?
हो, आम लगानीकर्तालाई सेयर बजार सम्बन्धी यी र यस्तै चासोका विषयमा जानकारी अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले नेपाली पैसाले फेरि एक पटक आयोजना गर्दैछ, सेयर बजार तालिम । यही मंसिर २२ गते आइतबारदेखि २४ गते मंगलबारसम्म सञ्चालन हुने तालिममा सेयर बजारका महत्वपूर्ण आधारभूत, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान सिकाइनेछ ।
बजारका प्रमुख प्राविधिक पक्षहरुका बारेमा पनि लगानीकर्ताले सिक्न सक्नेछन् । तालिम नेपाली पैसाको कार्यालय पानीपोखरीमा साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । तालिमका प्रशिक्षक डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । थप जानकारीका लागि ४४१०४८८ वा ९८०१११३१२४ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
आफ्नो नाम दर्ता गर्न तथा कोर्षका बारेमा थाहा पाउन यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब २६ करोड बजेट
कोरोना रोग नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारी बाहेक सबैको अतिरिक्त भत्ता खारेज
होटल र ट्राभल क्षेत्रका व्यवसायमा २०% आयकर छुट
सांसद विकास कोषको रकम घट्यो, अब ४ करोड मात्र दिइने
१ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने
ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब ९६ करोड